ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပါ…. မမခိုင်ဇာရယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပါ…. မမခိုင်ဇာရယ်…
Posted by alinsett on Nov 6, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News, Photography | 60 comments
အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား အမြင်မတော်တာလေးတွေ
အဟက် အဟက်… မတော်တရော်တွေ တွေ့ ခဲ့တယ်..။
အဝေးက လှမ်းမြင်ရတဲ့ …ရေလယ်က စေတီတော်
ကျိုက်မှော်ဝန်း စေတီတော် ဆီသို့ဆိုက်ကပ်ခြင်း
ဒါလည်း..စေတီပေါ်က..လှမ်းကြည့်တာ… စက်လှေစီးခဲ့တဲ့ နေရာဆီ..
ငါးစာကျွေးနေတာတဲ့ …။ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေက..ရေထဲ ကျတာ..ကျလို့ …ပြန့်ကျဲ..နေတာ
ဟို…. နိုင်ငံခြားသားတွေ မြင်သွားပြီ… ရှက်ထာ….
ငါးကလေးတွေများ..စားမိကုန်ရင် ခက်မယ် ။ ရေထုကိုလည်း..နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခပေးနေမယ့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ..
အမှိုက်ပုံးလေးတော့..ချထားပါတယ် ။ဘယ်သူမှ…ဒီထဲ လာမထည့်ဘူး..တဲ့ ..ငှက်ကလေးက ပြောသွားတယ် …
ထမင်းအ၀စား 500 တဲ့ ။ ဘာဟင်းနဲ့ စားစားတဲ့ ။ဆိုလို့ .၀င်စားလိုက်ပါတယ် ။ ထမင်းချည်းပဲ အ၀စား 500 တဲ့ ..။ ဟင်းက တစ်ပွဲ 1000 ဆိုတာကို..စားခါနီးမှ လာပြောတယ် ။ အဟက် ။ အ၀စား 1500 လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြီးရောကိုများ…
5 ရက် 11 လ 2013 တုန်းက…
ကျောက်တန်းက..ကျိုက်မှော်ဝန်းနဲ့ ..ကျိုက်ခေါက်စေတီတော်သွားခဲ့ပါတယ် ။
အမြင်မတော်တာတွေရော.. အမြင်တော်တာတွေရော…. တန်းစီနေလို့ …. နည်းနည်း..ပြောပြကြည့်တာပါ.. ။
မမခိုင်ဇာ ကို တ ပြီးပြောလိုက်တယ်နော်..။ အဟိ ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို တိုင်တည်ပြီး ပြောမှ အရသာရှိတာမို့ …။
ပုံတွေကို.. ကင်မရာမပါသွားလို့ .. ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ .. ရိုက်လာတာပါ ။ သိပ်တော့ကြည်လင်မှာမဟုတ်ဘူး..။
နောက်ထပ် အက်ဆေးတစ်ပုဒ် လာဦးမယ်..နော်…။
ငါ first, ငါ first, haha
ဒေါ်ဖွားမေ တို့ ဒေါ် ဂျီးဗုံ တို့ ကော တိုင်တည်ပြီး ပြော ဘူး လား?
ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ကို.. အမှိုက်ပုံးထဲမထည့်ရင်.. မထည့်သူကို…
.. ရေငံပိုင်ရှင်ကြီးက.. ရေငံနယ်ရောက်ရင်.. ကျိန်စာတိုက်သတ်မယ်ဆိုတာလေး.. အမှိုက်ပုံးမှာရေးထားသင့်ကြောင်း…
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး ပျက်စီးသွားမှာကိုသာ မကြောက်ကြတာ
ရေငံပိုင်ကြီး ဆိုရင်တော့ ဖိန့်ဖိန့်တုန် နေမှာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံက “လ” ကိုသွားတဲ့ ဒုံးပျံနဲ့လိုက်ပြီး နေရာသွားဦးနေပြီ
“လ” မဟုတ်ဘူး မှားသွားလို့
Eeee…:( အဲ့လို သူကြီးလို လူမျိုးတွေများနေလို့။ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသားနဲ့ သူများတွေကိုလှည့်စားပြီးညာခြောက်နေတာ။ ပုံပြင်တွေပြောပြီး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့မကြောက်ရေးချမကြောက်။ ကြောက်မလား စိတ်ထဲပေါ်ရာလျှောက်ပြောနေတာကိုး။ ပြောရ ရင် ehtic နဲ့ responsibilities အားနည်းနေတာပါ။ အမှိုက်ကောက်တာ ဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးလုပ်တာဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်ယူစရာတခုလို့ ခံစားမနေပဲ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ခံယူပြီးလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်။ ရေလည်ဘုရားကိုအခေါက်ပေါင်းမရေနိုင်အောင်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ပျော်စရာကောင်းတယ် ရေတွေတက်လာရင်။
တယောက်ကြိုက်လိုက်. ခေါက်လိုက် ပေါ့စ့်နော်
အွန် ကျိုက်ခေါက်ဟုတ်ပါဘူး။ ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလည်ဘုရားပါ။ မကြိုက်လည်းခေါက်ပါတယ် အမြင်ကပ်ရင်ပိုခေါက်တယ် ခေါင်းကို လက်ဆစ်တွေနဲ့ ကီးဘုတ်အစား။
ထိပ် တင် ဂီရယ်
ကြိုက်လို့ ခေါက်တဲ့ ကျိုက်ခေါက် ဟုတ်ပါဘူး
ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး တောက် ခေါက် တဲ့ ကျိုက်ခေါက်ပါ
ဘယ်သူက ခေါက်တာလဲ သိလား
ဘာလို့ ခေါက်လဲတော့ ကွကိုယ်တွေးကျိ
လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကိစ္စလို့ သိသွားလောက်အောင်
အဲဒီ အမှိုက်ပစ်သူတွေရဲ့ အသိထဲ အဲဒီ စိတ်လေး ရှိစေချင်တာ
ကောင်းတာလုပ် ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာထက်
ကောင်းတာ လုပ်ရတာကို မြတ်နိုးလွန်း ဂုဏ်ယူလွန်းလို့ လုပ်တဲ့အလုပ်က ပို မြတ်တာ
ခပ်လွယ်လွယ် ကိုယ့်လက်ထဲကလွတ် ပြီးရော ဆိုတဲ့ လူတွေ သိစေချင်တာ။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသိတွေ အမြင်တွေ ရှိဖို့ 
ကျွန်တော်အားလုံးမှာ တာဝန်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ် ထင်ပါရဲ့ ။
ကျွန်တော် လေးတန်းအောင်ပြီးတုန်းက တစ်ခါ
အခု တစ်ခါပဲ ရောက်သေးတယ် ။
ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးတွေပဲ မြင်ရဦးမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တော့ ပျော်မှာ မဟုတ်ဘူး
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ မြေပေါ်မှာမြင်ရင် သိပ်အသည်းယားတာပဲ။
ကြိမ်ဒဏ်တစ်ချက် စောင့် ရိုက်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်
ထမင်းအ၀စား 500 တဲ့ ။ ဘာဟင်းနဲ့ စားစားတဲ့ ။ ထမင်းချည်းပဲ အ၀စား 500 တဲ့ ..။ ဟင်းက တစ်ပွဲ 1000 ဆိုတာကို..စားခါနီးမှ လာပြောတယ်
အင်း အဲလို အကျင့် တွေကို ဖျောက် သင့်နေပြီ
အထူးသဖြင့် ဘုရား မှာ ဈေးရောင်း ပြီး တော့ဗျာ ။ လိမ် တာမဟုတ်ပေမဲ့ မလှိမ့် တစ်ပါတ် လုပ်နေသလိုဘဲ
ဓာတ်ပုံ လေးတွေ ရှယ် ပေးတာ အတွက် ကျေးဇူး ပါ ကို အလင်း
ဆိုင်ထဲ ဝင် ထိုင်ပြီး မမှာခင်ကတော့ ရှင်းမပြဘူး
ဟင်းတွေမှာပြီးလို့ ဇွန်းကိုင်ပြီး စားမယ်အလုပ်မှာမှ
ဟင်းတစ်ပွဲက တစ်ထောင်ပါ တဲ့
ထမင်းက အဝစား ငါးရာတဲ့ ။
အစကတည်းက အဝစား ထောင့်ငါးရာလို့ ပြောရောင်းရင် စိတ်မတိုပါဘူး။
တကယ်လို့ ငါးရာလောက်ပဲ ပါတဲ့သူဆို ခက်ရော
ကိုစိုင်းကို တိုင်တည်ပြီးရေးရဦးမယ် အဟိ
အိုက်ရေလယ်ဘုရားက ချစ်သူနဲ့သွားရင် ကွဲတတ်သတဲ့…
အိုက်လို ပြောတာတွေ သိပ်ကြားရတာပဲ
ဘုရားတွေကပဲ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား လိုက်ပြီး ခွဲနေသလိူလိုနဲ့
ဘုရားတွေကို အားနာလိုက်တာ ။ မတရား စွပ်စွဲခံနေရ ရှာတယ်
ကွဲကွာ စရာ အကြောင်း ရှိလို့ ကွဲကွာတာကိုများ
သူ့ ဘာသာ နေတဲ့ ဘုရားကြောင့်ဆိုပြီး တရားခံရှာကြတာများ
shinn shinn ပြောဘာာဟ
အလင်းဆက်ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရှုထောင့်က မြင်တတ်ပုံလေးကို ချီးကျူးပါတယ်
မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း အရွယ်ကစလို့ ဒီစည်းကမ်းလေးတွေလေ့ကျင့်ပေးပါမှ…
စိတ်ဝင်တစားဖတ်မိပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းက စပြီး
ကျွန်တော်တော့ ကိုယ့်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ်နာမှာမျိုး
အမှိုက်အိတ်တောင် အမှိုက်ပုံထိ အရောက်သယ်တဲ့အကျင့်လေး ရသွားတယ်
ဦးကြီး ပြောသလို မူကြိုလောက်က စ ပြီး
အဲဒီ အသိလေးတွေ ထည့်ပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်
၀က်ရယ် နင့်နှယ်…..အိုက် ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်တွေ
ဗုံဂျီး အတွက် ကောက်ခဲ့ရမှာ
နောက်တခါ ရောက်ရင် ကောက်ခဲ့မယ်
ပါဆယ်ထုပ်ပြီး ပို့ လိုက်မယ်
ဘာဒွေ ပေါမှာဒုန်းရို့ လန့်သွားတာပဲ။
ပထမဆုံး စာကြောင်းကလည်း အဟက် တို့ မတော်တရော်တို့နဲ့ စ တာ ဆိုတော့လေ။
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထက် လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်က အရေးကြီးပါတယ်အေ။
မပူနဲ့ မောင်လေး ၂၀၂၀ ထိစောင့်လိုက်။
မမဂျီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးရင် ဒါတွေ အကုန်ပြေလည်စေရမယ်။
ဟင် 2020 ဆိုရင် မွမွဂျီးက အသက် ရှစ်ဆယ်ကျော်နေဘီလေ……
အိုက်အရွယ်နဲ့ ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်ကောက်ဖို့ မှ မသင့်တော်တာ……
ဒီဗုံ လူထူပီဆို ၆ကျပ်ခွဲဘီ..
မမဂျီး ပြောတဲ့ နှစ်ဆို
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ တောင်လိုပုံနေတဲ့ မြို့တော်ကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီ
ပုံတွေလဲလှပါတယ်အေ ကျန်တာလဲကောင်းပါတယ်အေ ဒါပေမဲ့
“ဟို…. နိုင်ငံခြားသားတွေ မြင်သွားပြီ… ရှက်ထာ….”
ဆိုတာလေးမပါရင်ကောင်းမယ်အေ။ အဲဒီနိုင်ငံခြားသားဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ Tour Company ဆိုတဲ့ဟာတွေ ကို ရိုက်ချင်လွန်းလို့ပါအေ။ နောက်မှအကြောင်းစုံပြောပြတော့မယ်။ အခုတော့ဒီလောက်ပဲအေ။
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ အလင်းဆက်ရယ် ဆိုပြီး ပြောမှာလားဟင်
အန်တီသဲ ပြောပြမယ်ဆိုတာကို ဆိတ်ဝင်ဆားသွားဘီ
ဘယ့်နှယ့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေကို တစ်ဖက်တလမ်းက ရှာပေးနေတဲ့ တိုးကုန်ပဏီတွေကို လာခလုတ်တိုက်ရသတုန်း….ပြောရင်လည်းကြွားတယ်ဖြစ်မယ်…တချို့တိုးကုန်ပဏီက မန်နေဂျာလေးတွေများ ချောလိုက်တာ မှုန်လို့….( မဆိုင်ဆိုင်ရာ ဆွဲပြောတာ…အဟိဟိ )
ရေလယ်ဘုရားက ထမင်းဆိုင်မှာ သွားစားပါလား
အာ့ဆိုလည်း ကဆော ရယ်
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ အန်တီသဲရယ် ဆိုပြီး
နာမရေးရဲဘူး ကြောက်တယ်….သူနာ့ကို အရမ်းသမတယ်….နာ့ကို ကပ်ပလီတစ်အုပ်နဲ့တွေ့ပေးထာတာ တယ်မကြာလှသေးဘူး…အဟင့်
အေးပါ အဲဒီ တိုးကန်ပဏီကမန်နေဂျာဆိုတဲ့ဟာဒွေကိုရိုက်ချင်သပေါ့အေ။ ပိုစ့်တပုဒ်လောက်ရေးပြီး ရိုက်လိုက်အုံးမှထင်ဒယ်အေ့။
ကိုရင်ဆောရိုး ဦးသွားပြီကိုး… (မန်နေဂျာချောတာမပါ)
အာတီသဲ… အနော့်ကို ပို့စ်ရေးအောင် ဆွနေတာလား..
ဒမှာ field တောင် change ချင်နေတာနော်…
အေးအေ့ ကပ်ပလီမှ ၁၀ ယောက်တောင်အေ အားကောင်းမောင်းသန်တွေချည်း
ဟဲ့ ဟဲ့ ဘာထိုင်ကြည့်နေတာလဲ ကန်တော့လိုက်လေ။
ဟာဒီကလေး ဒုံးဝေးပ နင်ရှေ့မှာမမြင်ဘူးလား ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီး ရေငံလည်ဘိုးဘိုးကြီး နဂါးမယ်တော် သူရဿတီမယ်တွေ လေ။
သြော် ဟုတ်ပ သူတို့နေတဲ့နေရာကို တကူးတကသွားပြီး ကန်တော့ရမယ်ဆိုရင် ရောက်ဖို့မလွယ်တော့ ဒီမှာကြုံတုန်း ကန်တော့ပြီး သိန်းထီကြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ပေါက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်အုံးမှဘဲလေ။
( ကိုအလင်းဆက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး အများနဲ့မတူတဲ့အတွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည်။ )
ရေငံပိုင် ဦးဆက်ဂျီး ဖြစ်ပေဒေါ့သဂိုးးး
ဟိုနေ့ကတင် စလုံးက မြန်မာတွေစုရပ်မှာ အမှိုက်တွေ ပွနေတဲ့အကြောင်း
မမဂျီးခိုင်ဇာတို့ ..စားထားတဲ့အစားအသောက် အိတ်ခွံတွေများ..
အမှတ်မမှားရင် (စီအာ သဂျီး)
အဲလို ဖြစ်နေတာ အတော်ကြာပြီထင်တယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီအကြောင်းကို ဖတ်ဖူးနေတာ အတော်ကြာပြီ
ဒါ့ပုံ ပုံပြင် လေး ပါလား။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ကွက် တွေ။ လှမှလှ။
ထမင်းဆိုင် ပုံပြင်မှာတော့ အူမတောင့်မှ သီလ စောင့်ကြမဲ့ သူတွေ ချည်းဘဲ များနေပြီလို့ ထင်ပါရဲ့။
အူမတောင့်မှ သီလစောင့်…ဆိုလို့ …
သီလမစောင့်တဲ့ သူတွေ ..အူမတောင့်နေတာကို ပြေးမြင်တယ်..
အကြောင်းညီညွတ်ချိန်မှာ.. အကျိုးပေးမှာတော့.. ဟုတ်ပါရဲ့ ..။
အဲဒီ အကြောင်းညီညွတ်ချိန်ကိုရောက်ဖို့ …
အိုက်တော့…သီလစောင့်ဖို့ လည်း.. စိတ်မရှည်ကြတော့ဘူး.ထင်ပါရဲ့ …
ထမင်းဆိုင်တစ်ချို့ တွေ အဲလို လုပ်နေတုန်းဘဲနော်..
ထမင်းဆိုင်တင်မှ မဟုတ်ပါဘူးလေ… နေရာစုံမှာပါ..တို့ လူမျိုးတွေ ရိုးရိုးသားသားရှာစားရတာကို ဂုဏ်မယူချင်ဘူးဖြစ်မယ်..။
ပြောလိုက်ရင်လည်း ထေရ၀ါဒကို ပါးစပ်က မချဘူး…လက်တွေ့ ကတော့ လည်သလိုနှက်…ဘဲ။
နောက် တခါ ဘုရားသွားရင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ ကောက်ခဲ့ပါ.. ကေဇီ ထမင်းဆိုင်ကို ဖောက်သည်ပြန်သွင်းလို့ ၇တယ်..။
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းရတာလည်း နာလှပြီ
နောက်အခါ ငါ့နာမည်ကို တ ပြီး ပြော …
ပြောပြချင်နွန်းနို့ဘာ ဆရာကြီး x 1000 အံစာရယ် ဆိုပီး …
နေကာ မျက်မှန်တပ်တွား …
ကျားဒလား … အောင်မဲလင်းးး
နီ နာမည် တမယ့်အစား
ဒေါ်ဖွားမေ ကိုပဲ တ တော့မယ်ကွာ
ထေရဝါဒနိုင်ငံဆိုပြီး အော်နေတဲ့ နိုင်ငံက ထေရဝါဒ မစစ်ဆုံး နိုင်ငံများ ဖြစ်နေလားလို့…
ထမင်းအ၀စား ၅၀၀ ဆိုတာ လိမ်တာမှ မဟုတ်ပဲ။
ရိုးရိုးသားသား ရောင်းရတာ ပျင်းးစရာ ကောင်းလို့ ထင်ပါရဲ့ အန်တီမမရယ်